भिडियो Archives - Hello Punarwas
कमल शिरीष पुजाराको कहाली लाग्दो अधुरो प्रेम (भिडियो सहित)
हेल्लो समाचारदाता पुनर्वास, ४ असार। नेपाली लोक संगीतको बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक कमल शिरीष पुजाराको ‘अधुरो प्रेम’ लोक दोहोरी गीत बजारमा आएको छ । आइतबार मात्र युट्युव च्यानल मार्फत गीत बजारमा आएको अधुरो प्रेम गीतले श्रोताको वाह् वाही…Read more
हान्दिने हो र्याप भन्दै आए विरही (भिडियो सहित)
पुष्पा बडैला धनगढी, २३ जेठ । हान्दिने हो र्याप बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । बिरही प्रेम जोशी आफ्नो तेस्रो गीत हान्दिने हो र्यापका साथमा बजारमा आएका हुन् । युक्त गीतमा जोशीले आफै स्वर दिएका छन् भने लय लोक खड्का…Read more
सुरेन्द्र बडुको “तिम्रो मेरो पिरतीको काहानीमा”को म्यूजिक भिडियो बजारमा (भिडियो सहित)
चाँदनी बोगटी धनगढी, ०३ जेठ । रचनाकार एवम गायक सुरेन्द्र राज बडुको “तिम्रो मेरो पिरतीको काहानीमा” गीतको भिडियो बिहिबार बजारमा आएको छ । यूटुब च्यानल बुढासुब्बा डिजिटल प्राईभेट लिमिटेडको युटुब च्यानलमार्फत बजारमा आएको हो । भिडियोमा युवाले चोखो प्रेममा गर्दा युवतीले…Read more
‘बिरही प्रेम जोशी’को देउडा म्युजिक भिडियो “जान्छु म भारत” (भिडियो सहित)
हेल्लो समाचारदाता धनगढी, २३ चैत्र । देउडा म्युजिक भिडियो “जान्छु म भारत” यू ट्यूबमा सार्बजनिक भएको छ । सुदूरपश्चिमबाट उदाउदा कलाकारद्वय .बिरही प्रेम जोशी र पुष्पा बडैलाको अभिनयमा सो गीतको भिडियो यू ट्यूबमा सार्बजनिक भएको हो । सुदूरपश्चिमको बिभिन्न स्थानीयहरुलाई…Read more
कैलालीको धनगढी स्थित ड्रिम एडुकेशन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक हेमन्त रेग्मीसँग हेल्लो पुनर्वास अनलाइन टी.भी.का सञ्चालक रञ्जित लामा
चर्चित भारतीय गायक कुमार सानु नेपालमा(भिडियो)
युट्युबमा कसरी करोड ‘भ्युज’ पाए यी गीतले ?
कुन गीत कति चर्चित भयो ? नतिजाको लागि कुनै म्युजिकल कार्यक्रमको ‘काउन डाउन’ पर्खिरहनु पर्दैन । न त, गायक/संगीतकारले ठोकुवा गरेकै कुरा पत्याउनु पर्नेछ । किनभने त्यसलाई नाप्ने गतिलो ब्यारोमिटर हो, युट्युब । अहिले कुन गीत कति चर्चित भयो भन्ने…Read more
अनिलको पाइलासँगै हिड्ने बर्षाको चाहना
अनन्त तिमिल्सिनाको निर्देशनमा तयार भएको ‘तिम्रो पाइला सँगसँगै’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा बर्षा सिवाकोटी र अनिल थापाको मोडलिङ छ । ‘बाटो’ एल्बमबाट लिइएको यो गीतमा अन्जु पन्तको स्वर, आलोक श्रीको संगीत, अशोक शेरचनको शब्द छ…Read more
मंसिर १५ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । बेलायतका निकै रमणिय स्थानमा खिचिएको यो चलचित्रमा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, संजय गुप्ता लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । चाम्स इन्टरटेन्मेन्ट र लण्डन सिने आइको प्रस्तुतीमा…Read more
भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उपेन्द्रले गरे प्रचण्ड सरकारको विकल्पको संकेत (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १२ चैत्र ।नेसंघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति चरम रुपमा बढेको बताएका छन् । यसको विकल्प खोज्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै संघीय गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका यादवले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पको संकेत गरेका छन ।…Read more
‘मन पराएकालाई स्विकार्न सजिलो छ, हाँसी हाँसी बिदा गर्न पो हिम्मत चाहिन्छ’
शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ‘लभ लभ लभ’ वैशाख १ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । निर्मात्री पाण्डे अहिले चलचित्रको ट्रेलर, गीतले राम्रो चर्चा पाएपछि उत्साहित छिन् । उनले भनिन्–‘हामीले जुन सोच अनुसार चलचित्र बनाएका थियौ, दर्शकले पनि यसको गीत र…Read more
कसरी ढले सहिद गोविन्द गौतम ? हेर्नुस् पूरा भिडियो
गत बिहीबार एसएसबीको गोलीबाट कसरी ढले सहिद गोविन्द गौतम ? आफु ढलेर नेपाली स्वाभिमानलाई कसरी जोगाएका थिए सहिद गोविन्द गौतमले ? एसएसबीको बन्दूक र गोलीलाई समेत पर्वाह नगरि यस्तो भिडियोलाई क्यामरामा कैद गर्ने को थिए ती सहासी ब्यक्ति ? घटनाको…Read more
एसएसबीको गोलीबाट कसरी ढले सहिद गोविन्द गौतम ? हेर्नुस् भिडियोमा ः
पुनर्वासकी दियाको ‘तिम्रै नाम’ युटुवमा
सांगीतिक क्षेत्रमा पाइला टेक्दै गरेकी पुनर्वासकी दिया पोखरेलले आफ्नो पहिलो म्युजिक भिडियो ‘तिम्रै नाम’ युटुव मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । आधुनिक एल्बम ‘मधुर’मा समेटिएको उक्त गीतमा दियालार्ई मनोजराज सिवाकोटीले स्वरमा साथ दिएका छन् । सिल्पा पोखरेल र पुष्प खड्काले अभिनय…Read more
सहिद गौतमको संक्षिप्त परिचय
न्यूज 24 ले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस् ! https://www.youtube.com/watch?v=TqwUWwTVH70Read more
सहिद गोविन्द गौतम
सहिद गोविन्द गौतमको बारेमा न्यूज 24 ले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्ः https://www.youtube.com/watch?v=54tTZ9r8QZoRead more
‘नेपाली भूमिमा आएर हाम्रा दाजुभाईको गोली हानी हत्या गर्दा कहाँ छ नेपाल सरकार ?’
नेपाली भूमिमा आएर हाम्रा दाजुभाईलाइ गोली हानी हत्या गर्दा कहाँ छ नेपाल सरकार ? भारतीय दादागिरीविरुद्ध ओली आक्रोशित । हेर्नुस् भिडियोः https://www.youtube.com/watch?v=HZlgIZua8P0&t=689sRead more
‘बाहुबली २’ को ट्रेलरले रेकर्ड तोड्यो, २४ घण्टामा ५ करोड भन्दा बढीले हेरे
मुम्बई । विहीबार रिलिज गरिएको बलिउड फिल्म ‘बाहुबली २’ को ट्रेलरलाई सार्वजनिक भएको २४ घण्टामा पाँच करोड बढी मानिसले हेरेका छन् । ट्रेलर लन्च हुने वित्तिकै निकै भाइरल भएको थियो । ‘बाहुबली २’ को ट्रेलरलाई धेरैले कुरिरहेका कारण यो तेज…Read more